Musharax Xasan Sheekh oo ku adkaaday loolankii maanta ka dhacay xarunta BF - Caasimada Online
Home Warar Musharax Xasan Sheekh oo ku adkaaday loolankii maanta ka dhacay xarunta BF
Musharax Xasan Sheekh oo ku adkaaday loolankii maanta ka dhacay xarunta BF
Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa madaxweyne Farmaajo kaga adkaaday doorashadii lagu doortay guddoomiyaha guddiga qaban-qaabada doorashada guddoonka Golaha Shacabka.
Xubnaha guddiga qaban-qaabada ee loo xil-saaray doorashada guddoonka Golaha Shacabka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxay guddoomiye u doorteen Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed.
Cabdirisaaq oo ka tirsanxisbiga uu hogaamiyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh ee UPD, ayaa helay 5 cod, isaga oo sidaas uga adkaaday kooxda madaxweyne Farmaajo oo iyagana dadaal u gelay inay helaan kursigaas.
Guddoomiyaha cusub ayaa si adag uga soo horjeeday shantii sano ee xilka u sareeya dalka uu joogay madaxweyneFarmaajo hab maamulkiisa iyo tallaabooyinkii uu u qaadayey.
Cabdirisaaq ayaa hogaaminaya guddigaan oo ka shaqeyn doona abaabulka iyo dhaarinta guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo labadiisa ku-xigeen, waxay guushiisana banaanka u saareysa in xubnaha qaban-qaabada guddiga ay badankooda yihiin mucaarid, marka laga reebo afar xubnood oo taabacsan Villa Somali.
Farmaajo iyo xulafadiisa ayaa fursad muhiim ah u arkayay inay gacanta ku dhigaan hogaanka guddigaan, kaasi oo ay uga faa’iideysan lahaayeen xal ka gaarista kursiga Fahad Yaasiin ee HOP#086 iyo loolanka guddoonka Golaha Shacabka, hase yeeshe hadda waa damac guul-dareystay.
Guul-darada Farmaajo ee loolanka hogaanka guddigaan ayaa sida ay qabaan falan-qeeyayaasha siyaasadu waxay saameyn ku yeelan doonta qorshaha dib usoo laabashadiisa.
Si kastaba, Guddoonka KMG ah ee guddiyada labada aqal iyo guddiyada qaban-qaabada ayay ka go’an tahay dadajinta doorashada guddoonka rasmiga ah ee labada gole, taasi oo u gogol xaadhi doonta qabashada doorashada madaxweynaha oo si weyn loogu hirdamayo.